သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: August 2007
ကိုဖြိုးက ဘလော့ဂ်နေ့အတွက် ကျွန်မကို တက်ဂ်လုပ်ထားတယ်.. “အစ်မ မရေးနိုင်လဲ ပုံလေးတော့ တင်လိုက်နော်” လို့ အလိုက်တသိပြောရှာပါတယ်။ ဒါကြောင့်
ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်တာကို ဂုဏ်ယူစွာနှင့် “ကိုယ်တိုင်ရေးပုံမတူ” လေးကိုပဲ ဘလော့ဂ်နေ့ အမှတ်တယအနေနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အိုကေ.. နိုးမော တက်ဂင်း ပလိစ်း…
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 10:10 PM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ရေးခဲ့သမျှထဲက အကြိုက်ဆုံးပို့စ် (၅)ခုကို ရွေးချယ်ပါလို့ ဟိုနေ့က ကိုရန်အောင် Tag လုပ်ထားတာနဲ့ ကျမရေးထားတာတွေထဲက သဘောကျတာအချို့ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကိုနေဘုန်းလတ်လိုပဲ ကျွန်မလဲ သူငယ်ချင်းများနဲ့ စာဖတ်သူများကို တောင်းဆိုချင်တာ ကျွန်မရေးတဲ့ အထဲက ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေကို ဘယ်နှစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် မှတ်ချက်ရေးရင်း ရေးသွားပေးပါနော်၊
ကျွန်မ ကြိုက်တဲ့ ကျွန်မပိုစ့်တွေကတော့…
(၁) နေရစ်ခဲ့တော့ …. သရပါ
(၂) ကျွန်မချစ်တဲ့ သစ်တစ်ပင်
(၄) ရုပ်ရှင်လက်မှတ်လေး နှစ်စောင်
(၅) Performance Review
ချစ်သူ့အိမ် နဲ့ သတင်းစာဆရာ လဲ ကြိုက်ပါတယ်။ အပိုလေးထည့်တာပါရှင့်။
ကိုဒီဝိုင်း (နောင်နှစ်ထဲ ရေးပေးရင်လဲ ကျေနပ်ပါတယ်… ကြာတတ်လွန်းလို့)
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:14 AM3comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 9:18 PM4comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:45 PM 10 comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:07 AM3comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:23 AM 16 comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:15 AM 15 comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
အိမ်ရှေ့လမ်းပေါ်မှာ နေရောင်ခြည် ကွက်တိကွက်ကြားက
လေပြေက သစ်ရွက်တွေကို ခပ်ဖွဖွ နမ်းရှိုက်လိုက်တယ်..။
သူတို့ရဲ့ ကိုယ်တွေကို လှုပ်ခတ်ရယ်မောနေကြတယ်။
ကောင်းကင်ပြာပေါ်မှာ တိမ်လိပ်တွေ ခရီးနှင်ရင်း
ကိုယ့်ကို ငုံ့ကြည့်၊ အပြုံးတစ်စင်းနဲ့ ခရီးဆက်နင်းသွားတယ်…။
တိမ်ဖြူတွေပုန်းတဲ့ မင်းမျက်နှာ ပြုံးပြုံးလေး…။
တိမ်တွေထဲမှာ…. မင်း….. တဲ့။
အရင်လို အပြေးလာပြီး ဖက်ထားဦးမှာလား။
လေထဲမှာ လွင့်နေတတ်တဲ့ မင်းဆံနွယ်တွေ ရှိုက်နမ်းခွင့် ကြုံဦးမလား။
အားမရှိတော့တဲ့ ရင်ထဲက သွေးတွေနဲ့
အလွမ်းတွေကို တစ်စစီ လိုက်ကောက်ထုတ်ပိုးလို့ ဟိုးကောင်းကင်ကို ပစ်ပေါက်
ဒီနေ့တော့ အတ္တတွေကို စုတ်ဖြဲ
မရယ်ချင်တဲ့ ညီနေတဲ့သွားတွေကို အမြဲပြ
လှပစွာကြိုးစားပြုံးရင်း.. မင်းရှိတဲ့ အလင်းဘက်
ဘုရားသခင်.. ဘုရားသခင်လို့ ဘုရားသခင်ကို အပြစ်ဖွဲ့
ဘုရားသခင်ကို စကားတွေနဲ့ သီချင်း၊ စာ၊ ကဗျာတွေထဲကတော့ ထုတ်ထားကြပါ။
ကြည်ဖြူစွာ၊ ကြေကွဲစွာ၊ ခြောက်ကပ်စွာ၊ မလှပလွန်းစွာ
(ဒီနေ့တော့ သိုးမည်းတစ်ကောင် ဘုရားကျောင်းဘက်..ခြေဦးလှည့်ဦးမယ်ကွယ်)
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 3:40 PM3comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:05 PM 15 comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
သောင်စပ်မှာ လှိုင်းသံတွေ တ၀ုန်းဝုန်းနဲ့
ရေပြင်ကျယ်ရှေ့ ငုတ်တုပ်ထိုင် ရေငတ်နေသူလေ
လည်ချောင်တွင်းက အက်ကွဲတဲ့ အသံတွေက ရေငတ်နေလို့လား..
သဲတွေထဲ နှစ်မြုပ်.. တုပ်တုပ်မှ မလှုပ်ကြစေနဲ့လို့
အစိုးမရတဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာ ဂီတနဲ့ ကျောက်ခဲ
ရောယှက်လို့ ကျောက်တန်းရေလယ် ဖန်တီးနေကြတယ်..
ဆားငန်ရေနဲ့ထိလို့ ကျိမ်းစပ်.. သွေးမတ်တပ်ရပ်ကြလို့
ငါ့သွေးတွေနဲ့ ခင်း၊ ပင်လယ်ထဲက ပန်းမုန်တိုင်းတွေကိုနင်း
ရေလယ်က ပွင့်နေတဲ့ ပုလဲပန်းတစ်ပွင့်ဆီ
လှုပ်ခါယိမ်းတဲ့ ကျောက်တန်းတလျှောက် ငါ့ခြေတွေ ယိုင်လဲတော့မယ်
ပန်းပုလဲတွေရဲ့ အော်ဟစ်သံတွေ သွေးပျက်သံတွေ။
ဖြူစင်မှုပေါ်ကို ညစ်နွမ်းမှုတွေ မစွန်းထင်းစေချင်လုိ့
ငါ့လက်တွေကို ကြိုးတုပ်..၊ ဒါမှမဟုတ်
ကောင်းကင်က သန့်ရှင်းခြင်းမီးနဲ့ ပူဇော်ကြ
ပင်လယ်ထဲက နတ်နန်းကြီးတစ်ခုဆီကတောင် တေးသံနဲ့ခင်း
ကောင်းကင်က သန့်ရှင်းခြင်း မီးတောက်တွေ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:34 AM6comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ